प्रहरीअधिकृतको चर्तिकला : पीडित मारमा,पीडकलाई यस्तो सुविधा ! हेर्नुहोस् भिडियो::Pathivara News
प्रहरीअधिकृतको चर्तिकला : पीडित मारमा,पीडकलाई यस्तो सुविधा ! हेर्नुहोस् भिडियो
पोखरा । साउन २४ गते हरियो खर्कमा सवारी दुर्घटनामा परि घाइते भएका ३५ वर्षिय सुर्य रानाभाटको दाँया खुट्टा काटिएको छ । मणिपालमा उपचार हुन नसकेपछि ग्राण्डी हस्पिटल काठमाडौं लगिएका सुर्यको गोडा घुँडा भन्दा मुनी काटिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको समाचार युनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले लेखेको छ ।
बन क्याम्पसबाट पोखरातर्फ आइरहेको ग ३ प ८३०१ नम्वरको मोटरसाइकलमा सवार रानाभाटलाई विपरित दिशावाट आएको ग२च ४६१५ नम्वरको कारले ठक्कर दिएको थियो । जनप्रिय क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख विरञ्जी गौतमले चलाएको कारले मोटरसाइकल चालकलाई ठक्कर दिए पछि रानाभाट सडकमा पल्टिएका थिए । दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकल करिव सय मिटर तल सम्म घिसारिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए ।